Seven/Eleven Myanmar/Burma Election Prediction | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » Seven/Eleven Myanmar/Burma Election Prediction
Seven/Eleven Myanmar/Burma Election Prediction
Posted by kai on Nov 6, 2010 in 2010/2012/2015 Election | 17 comments
ရရှိထားသော စစ်တမ်းအရ မြန်မာလူထုသဘောထားနှင့် သတင်းများကိုအခြေခံ၍ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပါသည်။ အချက်အလက်သာ အခြေခံပြီး ဘက်လိုက်ခြင်းမရှိ။
3. တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်(လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပေါင်း) – ၁၁၀+၅၆ = ၁၆၆
ခန့်မှန်းချက်( 6th Nov 2010)
၁။ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူအားလုံး၏ 85+%အထက်မဲပေးလိမ့်မည်။ (ပယ်မဲကို မဲပေးသည်ဟု ကောက်ယူသည်)
၂၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီသည် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပေါင်း၏ရာခိုင်နှုန်း 60+% အထက်အနိုင်ရလိမ့်မည်။ အမတ်စုစုပေါင်း 298+
၃။ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ၊ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပေါင်း၏ရာခိုင်နှုန်း20-%အနိုင်ရလိမ့်မည်။ အမတ်စုစုပေါင်း 80-
၄။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု၊ ၀င်ပြိုင်သမျှ၏ရာခိုင်နှုန်း 75+% အနိုင်ရလိမ့်မည်။ အမတ်စုစုပေါင်း 110+
၅။ ကျန်ပါတီများ- လွှတ်တော်၂ရပ်တွင် အမတ်နေရာစုစုပေါင်း 40 – Seats အောက်..။
၆။ နိုင်ငံတော်သမ္မတမှာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှရွေးချယ်ပေးလိုက်သူသာ ဖြစ်လိမ့်မည်။
– အထက်ပါခုံနေရာများတွင် လွတ်တော်၂ရပ်စုစုပေါင်း၏ ၁၆၆ ခုံနေရာရယူထားပြီးဖြစ်သော တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်နေရာများ မပါဝင်ပါ။
– အမှားအယွင်း 10%+/- ရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီ ခန့်မှန်းစာရင်းမှန်၊ မမှန်ကိုတော့ ညနေမှာ ထွက်မဲ့ အဖြေကို စောင့်ကြည့်ရပါမည်..။
ဘိုးတော်ကြောင်ကြီးလဲ ခါတော်မှီပွဲမှာ ဝင်ဆွမ်းကြီးလောင်းပါမည်။ နိုင်လျင်ငှက္ကဌကို ကြောင်ကြီးစားမည်။ ရှုံးလျင် ကြွက်တကောင် အရှင်ဖမ်းပေးမည်။
ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူအားလုံး၏ ၅၀% မဲပေးလိမ့်မည်။ (ပယ်မဲကို မဲပေးသည်ဟု ကောက်ယူသည်) တခုရှိတာက မဲစာရွက်အလွတ်များ အစားထိုးဖြည့်ခြင်း၊ မဲလိမ်ခြင်းများရှိမှာသေခြာ၍ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်း မဲလာပေးသလဲဆိုတာ ယုံကြည်ရန်ခဲယဉ်းပါသည်။
ငကြက်ဖွတ်များ ၈၅% ကျော်အနိုင်ရလိမ့်မည်။
ကျားအိုကြီးများပါတီ အန်ဒီအက်ဖ် ၅%
(+ – ၅% ခန့်မှန်းချက်လွဲချော်နိုင်သည်)
မှတ်ချက်။ အမှန်တကယ်မဲထည့်သည့် အရေအတွက်ကို တွက်ချက်၍ ခန့်မှန်းခြင်းမဟုတ်ဘဲ တပ်ဂျုတ်ကြီးထုတ်သုံးမည့် ညဏ်နီညဏ်မဲများကို အာရုံခံကြိုတင်ဟောကိန်း ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျန်သွားလို့ အထက်က ခန့်မှန်းချက်တွေက လွှတ်တော်တခုခြင်းရဲ့စုစုပေါင်းထိုင်ခုံပေါ် အခြေခံတွက်တာနော်။ ပါတီတခုခြင်းအလိုက်ဝင်ပြိုင်မဲ့အမတ်လောင်းဦးရေအလိုက် မဟုတ်ပါ။
လူတွေကတော့ ဒေသအလိုက် အပီပြင်မဲပေးကြမှာဘဲ
တစ်ကယ် ကြပ်မတ်စစ်ဆေးခွင့်ရလျှင် အဲ့သည်ကြက်ဖွတ် ၅% ဘဲရမှာ
ဘိုးတော်ကြောင်းကြီးပြောတဲ့ ၈၅% က အင်ကြီးလေဗျာ
ဒါပေမယ့် အမှန်က အမှား
အမှားက အမှန် ဖြစ်နေတယ်
ဘာဖြစ်ဖြစ် လူတွေစည်စည် ကားကားမဲပေးနေကြတာတွေ ကို သတင်းမှာ ပြပြီး
ကြက်ဖွတ်က အနိူင်ရသွားပါကြောင်း ( အဓိကအတိုက်ခံ ဘယ်သူဖြစ်မလဲကိုဘဲ စိတ်ဝင်စားတယ် အဲ့သည်ကောင်က အဖြေဘဲ တကယ်လို့ဒီမိုကရေစီ
အုပ်စုတွေကို အဓိကအတိုက်ခံထားပေးရင် အနာဂတ်တွက်ထွက်ပေါက်နည်းနည်းရှိလာနိုင်တယ် မအေ……..လိုးးးးးးးးးးးးးးးးး တစည တွေ ကို
ဒုတိယ အတိုက်ခံ အမတ်နေရာတွေ ပေးထားရင်တော့ (အဲ့ဒါက သူတို့ သဘော) ခင်ဗျားတို့ ဗမာတစ်ပြည်လုံး ဖာဖြစ်ပြီသာမှတ်)
MMVDSSY မြန်မာ့ဗိန္ဒောဆေးဆရာ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု
ဟောင်ကောင်က တီဗီအစီအစဉ်ထဲမှာ ရန်ကုန်မှာ စည်းကမ်းတကျ မဲပေးနေကြကြောင်း တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတယ် …
နောက်တခါထပ်ကြေငြာရင် တီဗွီမှန်ဖန်သားပြင်ကို ရိုက်ခွဲလိုက်ဗျာ။ လူတိုင်းအနည်းနဲ့အများတော့ ပေးဆပ်စွန့်လွှတ်ရမယ်ဆိုတာ မမေ့ကြနဲ့။
နောက်တစ်ခါ ထပ်မမြင်ရအောင် တီဗီပိတ်ထားလိုက်ပါပြီ …
အိန္ဒိယရောက်နေတဲ့ ယူအက်စ်သမ္မတရယ်.. သြစတေးလျှရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန်ရယ်က ဒီနေ့မြန်မာပြည်မှာလုပ်နေတဲ့ နာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ ဂီရိရွေးကောက်ပွဲဟာ အပြစ်အနာတွေနဲ့ မျှတမှုမရှိဘူးဆိုထားလိုက်ပါတယ်..။
ဒါကြောင့် နောင်နှစ်တွင်လည်း စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်..။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်လာပြီး နောင်တက်လာမဲ့အစိုးရအဖွဲ့ မှာ သူမကိုယ်တိုင်(သို့) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အရေးပါသူများ ပါဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ တမျိုးတမည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..။
– မြ၀တီကို ဒီကေဘီအေက သိမ်းတယ်ဆိုတာ သတင်းထွက်လာပြီး မဟုတ်မှန်ကြောင်းသတင်းတွေ ပြန်ထွက်ပါတယ်..။
– တနိုင်ငံလုံးမှာ ပုံမှန်ထက်မဲပေးသူဦးရေနည်းနေကြောင်း သတင်းတွေကဆိုနေပါတယ်..။(နေ့လည်အထိ)
– ပြည်နယ်တွေမှာ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကို မဲပေးတာများတယ်လို့ သတင်းတွေကဆိုနေပါတယ်။
– ဆန္ဒပြတဲ့သတင်းတွေ မတွေ့ရပါ။
– သတင်းတွေမှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုး၊ တစညသာ အဓိကသတင်းထွက်နေပြီး NDF ကိုရန်ကုန်ဝင်းကျင်မှာသာ ကြိုကြားတွေ့ရပါတယ်။
– ခြုံပြောရရင် နာဂစ်အခြေခံဥပဒေလိုပဲ … ဂီရိရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်စွာပြီးသွားပါတယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။
ဆရာခိုင်ရေ.. ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားပြီမို့ မဲစစ်တမ်းကို တကယ်မဲထည့်မထည့်၊ ဘယ်သူတွေကိုထည့်ခဲ့သလဲဆိုတာ စစ်တမ်းအသစ်တခု ထပ်လုပ်ကြည့်ပါလား။
(အိန္ဒိယရောက်နေတဲ့ ယူအက်စ်သမ္မတရယ်.. သြစတေးလျှရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန်ရယ်က ဒီနေ့မြန်မာပြည်မှာလုပ်နေတဲ့ နာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ ဂီရိရွေးကောက်ပွဲဟာ အပြစ်အနာတွေနဲ့ မျှတမှုမရှိဘူးဆိုထားလိုက်ပါတယ်..။ ဒါကြောင့် နောင်နှစ်တွင်လည်း စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် )
ကိုဘားမားကြီး နှစ်လယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အလူးအလဲခံနေရမဲ့ အချိန်မှာ တမင်ဖန်တီးပြီး ရွေးကောက်ပွဲကို လုပ်လိုက်တာလေဗျာ ဘာအောက်မေ့နေလို့ လည်း
ပြည်တွင်းအခြေစိုက်များ၇ဲ့အကူအညီနဲ့ခုအချိန်လုပ်သင့်တာတော့ (ပြည်ပအခြေစိုက်များ)ေ၇ွူးကောက်ပွဲအတွင်းမတ၇ားမှုများကိုဓါတ်ပုံ/ဗီဒီယိုနဲ့စာ၇ွက်စာတမ်းအထောက်အထားတွေကျကျနနစပြီးစုဆောင်းဘို့ပါဘဲ။ မနေ့ကဂျပန်အခြေစိုက်မြန်မာလှုပ်၇ှားမှုအဖွဲ့တခုကအချက်အလက်ပေါင်း(၅၀၀)ပါတဲ့စစ်အစိုး၇၇ဲ့မသမာမှုတွေကို၊ ကုလသမဂ္ဂကိုပေးပို့လိုက်တယ်ဆိုဘဲ။
Irrawaddy Blog ၇ဲ့ document list မှာ မြန်မာစစ်အစိုး၇ဲ့အဖွဲ့ဝင်များ၊လက်အောက်ခံအ၇ာ၇ှိအချို့နဲ့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စီးပွားေ၇း၊လူမှုေ၇းပုဂ္ဂိုလ်အချို့၇ဲ့စာ၇င်း (၁၃၁၅)ဦးစာ၇င်းပြုစုထားတာမျိုးကိုကြည့်ပါ။ (“မြန်မာ့တော်လှန်ေ၇း၏၇န်သူများ”)
သာမန်အားဖြင့်တော့ မဲကိစ္စတွေက သတင်းထောက်တွေစောင့်ကြည့်ကြတာထက် … အတိုက်အခံပါတီအချင်းချင်းပြန်စောင့်ကြည့်ရတာပါ။ သူတို့ကိုယ်စားလှယ်ပဲ မဲရုံထဲဝင်ရတာလို့ထင်ပါတယ်..။ သူတို့လုပ်ထားပါလိမ့်မယ်.. ။
မီဒီယာကတော့ အဲဒါတွေကို စုစည်းပေး အော်ပေးပေါ့။ မြန်မာပြည်က ဂျာနယ်သတင်းထောက်တွေ အင်မတန်တာဝန်ကြေပုံရပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကို ဖြန့်ထားနိုင်တာတွေ့ရလို့ပါ။ စစ်ဒဇင်ဂျာနယ်လစ်တွေလည်း တာဝန်ကြေမယ်ထင်ပါတယ်..။
မဲပေးသူရာခိုင်နှုန်းဟာ ၅၀ကျော်ရုံလောက်ပဲရှိမယ်ထင်တာပါပဲ..။ ကြိုတင်မဲတွေ ၀ုန်းကနဲ့ ထွက်လာပြီး ဖြတ်တက်သွားမဲ့နေရာတော်တော်များသမို့ .. အဲဒီအတွက် ၁၀ရာနှုန်း++ ထည့်ပေါင်းရမလားပါပဲ.. ။ ကျောချမှ ဓါးမြမှန်းသိရတာက .. ကြိုတင်မဲကိစ္စပါပဲ..။ ဘယ်သူမှအရေအတွက်မသိနိုင်တဲ့ လက်ရှိအာဏာပိုင်တွေရဲ့ ၀ှက်ဖဲလေ..။ ဘယ်သူနိုင်စေရှုံးစေကို အဲဒီမှာ ကုလားထိုင်ပေါ်ကနေဆုံးဖြတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်.. ။
ဂျာနယ်တွေက ၅၀ အထက်မဲပေးတယ်မှန်းထားပြီး ကျုပ်က ၈၅ အထက်ဆိုထားသမို့ … အဲဒီ ၃၅ ကို ကြိုတင်မဲနဲ့ဖြည့်ရင်တော့ …
မြန်မာပြည်က သတင်းထောက်တွေလည်း တာဝန်ကျေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ သိသလောက် ဖော်ပြခွင့် ရ၊ မရ ဆိုတာကလည်း ရှိသေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တကယ်အားကိုးရတာက CJ တွေပါပဲ။ Irrawaddy blog မှာ မဲရုံကို အပေါ်ကနေ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေ့မိတော့ CJ တွေကို အရမ်း လေးစားမိပါတယ်။
ဟုတ်ပဗျာ..။ ခုချိန်မြန်မာ့အေ၇းလေ့လာသုံးသပ်သူတွေ။ တတ်သိပညာ၇ှင်တွေက စစ်အစိုး၇နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်အလက်တွေစုဆောင်းနေကြမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးသားပါ။ တချို့ဆို၇င်အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံ၇ဲ့ဖွဲ့သည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကိုကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်ေ၇းဆွဲပြီးလို့ website တွေမှာတောင်တင်ထားတာတွေ့နေ၇ပြီဘဲ။
ယူအက်စ်မှာတော့ မဲလိမ်မဲ့ညစ်ဆို ဆိုင်ရာဝင်ပြိုင်နေတဲ့ပါတီက တရားစွဲတယ်..။ မီဒီယာကို သတင်းပို့တယ်..။
မြန်မာပြည်မှာက မဲညစ်သမို့ တရားစွဲချင်ရင် ၁၀သိန်းပေးမှ အမှုဖွင့်လို့ရမယ်ဆိုပါတယ်..။
ပါတီက …တရားမစွဲပဲ.. မဲဆန္ဒရှင်တွေကပဲ .. မေးကြည့်ကြဖို့ကောင်းတယ်..။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း မေးကြည့်သင့်တာပေါ့နော..။
မေးကြရမဲ့မေးခွန်းက…. အော်ပီကျယ် ဖေ့စ်ဘုတ်မှာတင်ထားတဲ့မေးခွန်းပါပဲ..။
မဲထည့်ခွင့်ရှိတဲ့ ဦးရေ၊ လာ မဲထည့်တဲ့ %၊ ကြီုတင်မဲ % တွေ သိရင် ကောင်းမယ်။
မဲလိမ်ရင် ဘာဖြစ်မှာလဲ သိချင်ပါတယ် .. ကြိုတင် (အင်) တွေကလဲ အဖြေကို တမျိုးတမည် ပြောင်းစေပါတယ် .. ကြိုတင်ကို နောက်မှာ ဘာလို့ ပေါင်းထည့်တာလဲ ဆိုတာကို သိချင်ပါတယ် ..
မဲမထည့်သူများစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ပေးရင် ခိုင်လုံတဲ့ မဲ အရေအတွက်ရယ် .. ပယ်မဲရယ် .. မဲမပေးသူရယ် ပေါင်းရင် ထိပ်ဆုံးမှာ ပြထားတဲ့ မဲပေးခွင့်ရှိသူ အရေအတွက်နဲ့ ညီ မညီ တွက်ကြည့်ချင်လို့ပါ ..
မှတ်ချက် ။ ။ သင်္ချာကို သိပ် စိတ်ဝင်စားတယ် .. ညီမျှခြင်းဆိုတာ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားတယ် .. ဟို ပေတံတွေ .. ဂူအောင်တာတွေ မိုးကြိုးထိတာတွေတော့ စိတ်မ၀င်စားပါ ..